Fandosirana gadra : raikitra ny savahao sy fisavana karapanondro | NewsMada
Fandosirana gadra : raikitra ny savahao sy fisavana karapanondro
Nanomboka afakomaly hariva, taorian’ny fisian’ireo gadra raindahiny nitsoaka teny Tsiafahy, raikitra ny fisavana kara-panondro eto an-dRenivohitra sy tany amin’ny faritra manodidina an’i Tsiafahy. Nisy ihany koa ny savahao tamin’ny tanàna vitsivitsy, toy ny tany Tsiafahy sy ny tany amin’ny toerana mety ho nodian’ireo gadra nitsoaka ireo. Ny teto an-dRenivohitra, rakotra polisy milanja basy misava kara-panondro ireo mpandeha an-tongotra, indrindra fa ny alina. Hatramin’ireo mpitondra moto aza tratran’izany.
Nisy ny feo nandeha omaly fa nisy nahatazana teny Ambohimahitsy ny iray tamin’ireo gadra, kanefa rehefa nanamarina ny mpitandro filaminana, tsy nisy akory izany.
Nilaza ny teo anivon’ny zandarimaria fa tsy mbola nisy tratra ireo gadra nitsoaka ny fonjan’i Tsiafahy ireo na iray aza. “Mandeha kosa anefa ny fisavana sy fisafoana amin’izao fotoana izao. Am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ny mombamomba ireo gadra ary efa misy ny fidinana ifotony any amin’ny trano fonenan’ireo olona ireo”, hoy ny fanazavana.
Ireo gadra tafatsoaka ireo izay voalaza hatrany fa jiolahy raindahiny, ka anisan’ny nampidirana azy tany Tsiafahy. Loza mitatao ho an’ny fiarahamonina ny firirian’ireo olona ireo. Mety hamerin-keloka ry zalahy ireo.
Ankoatra ireto teny Tsiafahy, mbola miriaria any ihany koa ireo tafatsaka tao amin’ny fonjan’Ambatondrazaka. Sarotra ny fikarohana ireo olon-dratsy ireo. Efa maty paika rahateo ny fitsoahany ka azo antoka fa tsy ho mora ny hahita azy ireo indray. Mety any anaty fanafihana sy asan-jiolahy any ny ahatrarana azy ireo tampoka.
Andrasana, andaniny, izay fepetra raisin’ny fitsarana sy ny mpandraharaha fonja amin’ny fanamafisana ny fiambenana ny fonja, sy ny fanatsarana ireny toerana ireny. Sanatria hisy fahavakisana hafa koa.